चुनावको रौनकले छोपेको बेला चैते धान रोप्ने चटारो ! — Arthatantra.com
Arthatantra.com > कृषि > चुनावको रौनकले छोपेको बेला चैते धान रोप्ने चटारो !
गुल्मी । सिंचाई सुविधा भएको र सिमसार क्षेत्रका किसानहरुलाई अहिले चैते धान लगाउन निकै हतार छ । गुल्मीको चौरासी फाँट, मजुवा, चाँपटारी, शान्तिपुर, रुपाकोट, खज्र्याङ, जुहाङ, हँसरा, हस्तिचौर, कुर्घा लगायतका फाँटहरुमा चैते धान खेती हुने गर्दछ ।
गुल्मीको चार सय ४० हेक्टर क्षेत्रफलमा चैते धान खेती हुने गर्दछ । सिंचाईको सुविधा भएमा दुई सय ९५ हेक्टर क्षेत्रफलमा चैते धान बिस्तार गर्न सकिने जिल्ला कृषि विकास कार्यालय गुल्मीका कृषि प्रसार अधिकृत रणबहादुर महत्तोले बताए । गएको वर्षको उत्पादन आंकडा हेर्दा जिल्लामा १३ सय ७६ मेट्रिकटन चैते धान उत्पादन भएको कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ ।
किसानले चैते धान खेती गरेको क्षेत्रफलको आधारमा अनुदान वितरण हुने वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत चक्रपाणी पन्थीले बताए । पन्थीका अनुसार एक हेक्टर क्षेत्रफलमा चैते धान रोप्ने किसानले पाँच हजार अनुदान पाउने व्यवस्था रहेको छ ।
२०७३ चैत्र २६ गते १६:१३ मा प्रकाशित
पाकिस्तानले चीनबाट ७५० अर्ब अमेरिकी डलर ऋण लिँदै
विद्युत चुहावट ३.२७ प्रतिशत घट्यो
पत्याउनुहुन्छ ? गफै गरेर नेपालमा दिनहुँ सकिन्छ १८ करोड !
एक मिनेटमा ४२ पोटी लसुन खाएर रेकर्ड !